﻿	Strawberry Trifle - Ezi Ntụziaka
kacha mma na-ekpo ọkụ nkịta anụ ihendori uzommeputa
oseose ohuru bido ighe uzommeputa na akwukwo nri
ego ole bụ poteto ụtọ mmadụ ọ bụla
ebee ka m nwere ike ịzụta achicha foneelu dị m nso
Kedu ihe ga-aka mma karịa a Strawberry Trifle N’oge anwụ na-ekpo ọkụ? N'ígwé nke ndị mmụọ ozi nri achicha, ọhụrụ tomato, na a creamy dịghị-akpọọ nkụ cheesecake ndochi -eme ka a eji megharịa ọnụ dị nnọọ ka ọ mara mma!
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmepụta desserts nke na-erite uru nke ihe ọhụrụ dị na oge ọkọchị dị ka piich cobbler ma ọ bụ bluuberi achịcha .
Kedu ihe dị na Trifle?
Nsogbu bu omenala ndi Britain, achicha ogbo achicha tinye ya n’ime mmanya, ya na nkpuru osisi, chocolate, jello, custard pudding, ma obu ihe obula obi gi choro. Ntụziaka a bụ nwanne nwanne ya nwanne boozier sitere n'ofe ọdọ mmiri ahụ. Ma oburu na umuaka anaghi eri ya, nweere onwe gi ka itinye ihe achicha ahu ike kariri ihe otite nke strawberry!
Achicha: Achicha Angel bụ ìhè na ikuku. Gbalịa kefriza ya tupu ịkpụkọta ya iji mee ka achicha ahụ mebie ka ị na-egbutu ya. Achịcha ọcha ma ọ bụ achicha paụnd ga-arụkwa na nhazi a.
Achịcha Chiiz Chiiz, ete ude na oroma zest pịa ọnụ ya na ihe ọ juiceụ orangeụ oroma tinye obere zippy gbagọrọ agbagọ na 'cheesecake' a.
Mkpụrụ: N'ezie, Strawberries! Gbalịa mee a kranberị ihe efu site na-agbanwe elu mkpụrụ oyi akwa.
Iji mee Juppy Strawberries
Gwakọta strawberries na shuga ma nye ha ohere ịnọdụ ala na tebụl ma ọ dịkarịa ala minit 30. Sugar ga - eme ka mkpụrụ osisi ahụ hapụ ihe ọ juụ juụ (nke na - eme obere ihe a). A na-akpọ usoro a na-egwu egwu ma na-arụ ọrụ na ọtụtụ mkpụrụ osisi.
ị nwere ike iji nnu kosher maka ice cream
Nwere ike iji shuga dị ka uzommeputa a kamakwa nsị nke mmanya kachasị amasị gị (dịka Grand Marnier) ma ọ bụ ọbụna ihe ọ evenụ cụ citrus.
Etu esi egwu egwu
Tọ ihe efu dị mfe! Ga-achọ ịhụ na ihe ọ juụ theụ ahụ ga-abanye n'ime achicha achicha na nhazi a mana ị chọghị ka achicha ahụ nwee mmiri. Anyị na-agbakwunye ihe ọ strawụ strawụ strawberry na achicha ahụ tupu ịkpụkọta ya maka ekpomeekpo.
Ikpokọta strawberries na sugar ka nọdụ. Ghichaa achicha achicha achicha na ahihia strawberry.
Ngwunye achicha nri achicha, chiiz chiiz, na strawberries na obere efere ma ọ bụ nnukwu efere. Tinyegharịa n'ígwé.
Jiri efere edere iji gosipụta ọkwa, ma ọ bụ jiri nri eji megharịa ọnụ ma ọ bụ ọbụna iko mmanya iji mepụta akụkụ nke ọ bụla. Zuo ike n'ime ngwa nju oyi maka awa 4.
Trifle kwesịrị ịnọdụ ala 4 awa ma ọ bụ n'abalị mana ọ ga-adịgide na ngwa nju oyi ruo ọtụtụ ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a n’ihu maka ihe omume ma ọ bụ nri abalị pụrụ iche, nwee ụfọdụ ude mmịrị na mkpụrụ osisi ọhụrụ iji dozie ya ntakịrị tupu ị jee ozi.
Achọpụtara m na mgbe awa iri abụọ na anọ gachara, obere ihe nwere ike ịdata ntakịrị ka inwe ike bulie ya elu ga-eme ka ọ dị mma dị ka nke ọhụrụ.
Enwere ike ịkụda oyi kpọnwụrụ?
Ihe na-adịkarị ntakịrị agaghị ajụ oyi nke ọma ozugbo a chịkọtara ya n'ihi oke ude. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ifriiza a na-atọ ụtọ strawberry, dochie ude dị arọ na shuga na usoro a site na ịpịpịa gị (dịka Cool Whip)
N'aka nke ọzọ, achicha ahụ na-egbochi beaufiuflly na tomato nwere ike ịjụ oyi mgbe ị masce (ma ọ bụ ịnwere ike iji strawberries oyi)!
More Fresh Mkpụrụ eji megharịa ọnụ
Strawberry Rhubarb Cobbler - kpokọtara Nchikota ụtọ & tart!
Arụrụ Bakee Meri - ụtọ kpochapụwo eji megharịa ọnụ
Creamy Piich achịcha - gbazee n'ọnụ gị ịdị mma!
Apple Cobbler - mfe & atọ ụtọ
Mkpụrụ Pizza dị mfe - yi, ụtọ, na flavorful
Oge Nkwadebe30 Nkeji Oge nri0 Nkeji Igwe nju oyi4 awa Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ8 Onye edemedeHolly Nilsson N'ígwé nke angel nri achicha, ọhụrụ tomato, na a N'ụbọchị nke abụọ, oroma-flavored dịghị-akpọọ nkụ cheesecake ndochi. Bipute Ntụtụ
▢3 pints strawberries
▢½ iko shuga
▢10 ' angel nri achicha ụlọ ahịa zụtara
▢16 ounce chiiz chiiz dị nro
▢1 oroma zested & juices
▢3 iko ude dị arọ pịa
Iberi strawberries na itulielu na ½ iko shuga. Kwe ka ịnọdụ ala n’ime ụlọ dịkarịa ala minit 30.
Achịcha nri nri mmụọ ozi n'ime 1 'cubes.
Iti cheese cheese, oroma zest, sugar, na ¼ cup oroma ihe ọ untilụ untilụ ruo mgbe N'ụbọchị nke abụọ. N'ogige atụrụ na ude mmiri ara ehi.
Igbapu strawberries ndetu ihe ọicesụ juụ.
Ebe ½ nke achicha cubes na ala nke a trifle efere. Drizzle na ọkara nke echekwara strawberry ihe ọ juiceụ strawụ. Top na ⅓ nke ude cheese na ngwakọta nke strawberries.
Tinyegharịa oyi akwa na elu ya na ndị fọdụrụ ude chiiz ngwakọta.
Friji dịkarịa ala awa 4 tupu ị na-eje ozi.
Calorisị:Ogbe 772,Carbohydrates:70g,Protein:9g,Abụba:53g,Abụba Ajuju:32g,Cholesterol:Ogbe 185mg,Sodium:435mg,Potassium:Ogbe 504mg,Eriri:4g,Sugar:iri iseg,Vitamin A:2132IU,Vitamin C:Ogbe 114mg,Calcium:184mg,Iron:1mg
IsiokwuStrawberry Trifle N'ezieDezaati Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .